लिभरपुलले अस्वीकारेको थियो रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्ने अवसर ! – Khel Dainik
लिभरपुलले अस्वीकारेको थियो रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्ने अवसर !
आश्विन ३०, २०७४ | (PostaComment)
क्रिष्टियानो रोनाल्डो (बीचमा) । (तस्विर एजेन्सी)
एजेन्सी । लिभरपुलका पूर्व म्यानेजर जेरार्ड हलियरले अहिलेका स्टार फरवार्ड क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई क्लबले त्यतिबेला अनुबन्ध नगर्नुको कारण खुलासा गरेका छन् ।
स्र्पोटिङ लिस्वनबाट खेलिरहेका बेला रोनाल्डो संसारकै प्रतिभावान युवा फुटबलरमध्ये एक मानिएका थिए । सन् २००३ मा लिभरपुलले रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्न चासो समेत देखाएको थियो ।
तर अनुबन्ध रकम र मासिक तलबको विषयमा कुरा नमिलेपछि लिभरपुलले रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्ने योजना त्यागेको थियो ।
त्यतिबेला १८ वर्षिय रोनाल्डोले मागे जति रकम तिर्न लिभरपुलले अस्वीकार गरेपछि रोनाल्डो १२ मिलियन पाउण्डमा म्यानचेष्टर युनाइटेडमा अनुबन्ध भएका थिए । त्यसपछि रोनाल्डोले युनाइटेडका लागि १९६ म्याच खेल्दै ८४ गोल समेत गरेका थिए ।
ओल्ड ट्राफोर्डमा कयौं उपाधि जितेपछि सन् २००९ मा रोनाल्डो ८० मिलियन पाउण्डको विश्व किर्तिमानी रकममा रियल मेड्रिड पुगेका थिए ।
यसबारे कुरा गर्दै हलियरले भनेका छन् “मैले रोनाल्डोलाई टोउलोन यु–२१ प्रतियोगितामा देखेको थिएँ र उनीप्रति चासो राखेका थियौं । तर लिभरपुलसँग खेलाडीलाई दिने रकमबारे निश्चित मापदण्ड थियो । रोनाल्डोले माग गरेको रकम क्लबको मापदण्डभन्दा धेरै थियो जुन हामी कुनै खेलाडीलाई दिन तयार थिएनौं ।
त्यसपछि म्यानचेष्टर युनाइटेडले स्र्पोटिङ लिस्वनसँग एउटा मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याच खेल्यो । खेलपश्चान युनाइटेडका खेलाडीहरुले सर एलेक्स फर्गुसनलाई रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्नुपर्ने दबाब दिएका थिए ।
तर म क्लबको मापदण्डविपरित उनलाई अनुबन्ध गर्न सक्दिनथे । यदि मैले त्यसो गरैको भए क्लबको ड्रेसिङ रुममा विवाद चुलिने थियो ।”
अहिले आएर रोनाल्डोले प्रतिष्ठित बेलोन डि अर अवार्ड ४ पटक जितिसकेका छन् । आफ्नो क्यारियरमा ६०० गोलको आँकडा पूरा गरिसकेका छन् । तर त्यतिबेला लिभरपुलका प्रशिक्षक हलियरलाई रोनाल्डो भन्दा अष्ट्रेलियाका हेरी किवेल उत्कृष्ट लाग्यो र लिभरपुलले यी अष्ट्रेलियन खेलाडीलाई ५ मिलियन पाउण्डमा अनुबन्ध गरेको थियो ।
← फिफा यु–१७ विश्वकपमा नकआउट चरणका खेलहरु आजदेखि प्रभावशाली जितका साथ जर्मनी क्वाटरफाइनलमा →
फुल कन्ट्याक्ट कराते शनिबार आश्विन ३०, २०७४
राइजिङ क्लबको जितको यात्रामा पूर्णविराम आश्विन ३०, २०७४
अफ्रिदीले इपिएलमा सबै म्याच नखेल्ने आश्विन ३०, २०७४
मल्लको स्थानमा भुर्तेललाई कप्तानी आश्विन ३०, २०७४
गलाक मुवाँथाई फाइट हुने आश्विन ३०, २०७४
नेपाली टेबलटेनिस टोली कतार जाने आश्विन ३०, २०७४